WithinReach waa gacansaarlaha ama xiriirlaha Gobolka Washington iyo qolada diyaarisa barnaamijka Help Me Grow. Maadaama ay tahay qolada diyaarisa, waxay hay'adda WithinReach hoggaamisaa ballaarinta nidaamka barnaamijka Help Me Grow ee Washington, iyadoo bulshooyinka degaanka kala shaqaysa in barnaamijka Help Me Grow lagu qorsheeyo oo lagu hirgaliyo hab ku toosan baahiyaha iyo khayraadka goonida ah ee gobolladooda. Waxaan weliba qaabilsan nahay barta helitaanka isku duwan ee gobolka oo dhan ee loogu talagalay qoysaska taageero raadinaya.
Hay'adda WithinReach waxay hirgalisaa agabyada ama qalabka qaabilaadda iyo qorshaynta ee barnaamijka Help Me Grow Qaran ee qaran oo ay la samayso bulshooyinka degaanka, waxayna hubisaa in shaqadoodu ay waafaqsan tahay sifooyinka muhiimka ah ee ku jira nidaamyada barnaamijka Help Me Grow ee waddanka oo dhan. Waxaan annagu shariikada ama dadka aan is kaashanno ugu deeqnaa latalin, tababbar iyo fursado waxbarasho la wadaago, iyo weliba xarun dhexe oo laga helo khayraad xul ah. Waxaan isku soo ururinnaa oo aan wadaagnaa caadooyinka xirfadeed ee ugu fiican, waxaan dhisnaa dariiqyo lagu wadaago xogta waxaanan ku deeqnaa taageerada kaabayaasha xogta.
Hay'adda WithinReach waxay abaabushaa talooyinka ku saabsan caadada xirfadeed iyo siyaasadaha ee ku toosan hindisooyinka carruurnimada hore ee gobolka oo dhan oo lagu dhiso aragti la wadaago oo laga haysto in nidaamka barnaamijka Help Me Grow ee Washington uu noqdo mid caddaali ah ama xaq ah. Waxaan la shaqaynaa oo aan is kaashannaa hay'adaha degmada iyo gobolka si aan u taageerno go'aannada caddaaliga ah ee si kas ah loogu raadiyo codka ama ra'yiga qoyska ee kaladuwan, si aan u dhisi karno nidaam ka turjuma baahiyaha bulshada ee gaarka ah una shaqeeya qoysaska oo dhan. Waxaan raadinnaa maalgelin waarta waxaanan dadka kale u awood siinnaa in ay iyaguna qareenimo bixiyaan oo ay doodaan.
La xiriir Khadka macluumaadka barnaamijka Help Me Grow ee Washington ee ah 1-800-322-2588 si aad war uga hesho ama wax uga barato khayraadka la xiriira caafimaadka, horumarka, habdhaqanka iyo waxbarashada. Marka aad wacdo khadka macluumaadka, mid ka mid ah Isuduweyaashayada Daryeelka ayaa dhegeysan doona walaacyda aad qabto waxuuna kuu heli doonaa khayraadka iyo adeegyada habboon si loo daboolo baahiyaha qoyskaaga.